China Nitrogen Protection Jet Mill System For Special Material ifektri abakhiqizi | Qiangdi
Uhlelo lwe-nitrogen protection jet mill -Luhlelo lwe-Nitrogen njengemidiya, ngaphansi kwengcindezi enhle, ukuqeda inqubo yokugaya yemikhiqizo ekhethekile enjengezinto ezivuthayo, eziqhumayo, ezine-oxidized kalula kanye ne-hygroscopic.
Uhlelo lwe-Nitrogen protection jet mill lusebenzisa i-Nitrogen gas njengemidiya yokuphefumula izimayini zokwenza inqubo eyomile yokwenza kahle kakhulu. Uhlelo lwe-jet mill ikakhulukazi Siqukethe i-compressor, ithangi lokugcina umoya, ithangi lokugcina impahla, isigayo sejet, isiphepho isihlukanisi, umqokeleli nesilawuli esizenzakalelayo. Lapho uhlelo lusebenza, igesi ye-nitrogen izokhishelwa ohlelweni ukuze kuqhutshwe umoya kuze kufike kulo lonke uhlelo ifinyelela inani lamanani elilungiswe umtshina womoya-mpilo. Ngemuva kwalokho uhlelo luzokwenza qala ngokuzenzakalela okokuphakela okokusebenza ukondla izinto ngokulinganayo ikamelo lokugaya lesigayo sejet. Ugesi ocindezelwe we-nitrogen ujojowe ku-a isivinini esikhulu singene egumbini lokugaya ngokusebenzisa umbhobho okhethekile we-ultrasonic. Ngakho-ke, izinto zokwakha zizogaywa phansi ngokusheshiswa, kube nomthelela futhi Ishayisane kaninginingi phakathi kwe-ultrasonic injection flow. Izinto zokwakhiwa komhlaba zizohlanganiswa kanye nokugeleza okuya egumbini lokulinganisa. Abakwazi ukungena esondweni lokulinganisa futhi bazobuyiselwa emuva egumbini lokugaya ukuze baqhubeke nokugaya. Izinhlamvu ezincanyana zizongena esondweni lokugreda bese ziqhunyiswa kusihlukanisi sesishingishane nomqoqi kanti igesi le-nitrogen izobuyela ku-compressor, okuyothi ngalo icindezelwe ukuze isetshenziswe kabusha.
I-1.Ifanelekile ukucubungula izinto ezivuthayo, eziqhumayo, ezine-oxidized kalula nezenziwe ngama-hygroscopic.
Ukusetshenziswa komshini kulawulwa yisikrini sokuthinta esithuthukile ne-PLC yokulawula okuzenzakalelayo, Kulula ukulawula okuqukethwe kwe-oxygen.
3.I-nitrogen isetshenziswe kabusha ngokusetshenziswa okuphansi kakhulu. Ukulawulwa kokuhlanzeka kwe-nitrogen kuphakeme kune-99%.
I-4.Ngokwempahla ye-Material, ungakhetha ukusebenzisa i-Jet mill noma i-ultra-fine pulverizer mechanical.
I-5.Iyasetshenziswa kakhulu eSulphur, Cobalt, i-nickel, i-boron oxide nezimonyo ze-hygroscopic njalonjalo.
6.Ukukala uhlelo lokulawula, ukucacisa okuphezulu, ukukhetha, ukuzinza komkhiqizo okuphezulu.
Idizayini yokuqhuma yokuqhuma kwesistimu yokusakazwa kwe-nitrogen ukuhlangabezana nezidingo zokugaya ezi-ultra-fine zezinto zokwakha ezivuthayo neziqhumayo.
Ishadi Lokugeleza Lenqubo Yokuvikela Ukuvikelwa KwamaNitrogen
Ishadi lokugeleza lisebenza ngokugaya okujwayelekile, futhi lingalungiswa kumakhasimende.Kunezingxenye ezintathu zohlelo lonke: Uhlelo lokukhiqiza lweNitrogen, uhlelo lokucindezelwa kweNitrogen, uhlelo lokugaya oluvalekile.
Amasampula wohlelo emkhakheni ohlukile
Kusetshenziswe Emithini (ikhasimende laseChina)
I-DBF-400 Ngokunamathisela i-Ceramics ne-PU .ngenxa yobulukhuni bayo obuphakeme futhi isetshenziselwa imboni yebhethri, Ngaphezu kwalokho, iyinto ehlanganisiwe, Ngakho-ke sisebenzisa i-NPS ukugaya le nto.
Ifektri yaseHongkong chemicle, i-Poly-Si powder egaya ibhethri, Isethi eyodwa yemigqa yokukhiqizwa kwe-DBF-400 Nitrogen Jet mill, Amandla wokukhiqiza 200kg / h, Usayizi wezinhlayiyana D90: 15μm
◆ Imikhiqizo yethu inemakethe enhle kulo lonke elaseChina,
Noma yini Ezimbonini zemithi, i-Agrochemical, i-New Material, i-Battery ne-Electron, izimboni zokumboza nezemibala.
◆ Sithumela imikhiqizo yethu emhlabeni wonke: iMelika, i-Australia, i-Afrika kanye neNingizimu-mpumalanga ye-Asia kanye namazwe aphakathi empumalanga, njengePakistan, Korea, Vietnam, India, Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Japan, Thailand, Egypt, Ukraine, Russia , njll. Ikakhulu eMkhakheni Wezolimo.
Langaphambilini Imboni Yebhethri Nokunye Ukusetshenziswa Kwamakhemikhali Okusebenzisa iJet Mill
Olandelayo: IJet Micron Grader Yokuhlunga